Rikoooo.com - AFG Pilatus PC 12
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 5 • Pejy 1 of 1
Joined: 26 Jun 2015, 18:52
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by sruble » 03 Apr 2018, 04:41
Misy drafitra hamoronana AFG Pilatus PC 12 FSX/ SE? Nahita olom-bitsy aho saingy tsy afaka nanangana azy ireo FSX/ SE.
Joined: 08 Des 2014, 09:37
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 03 Apr 2018, 05:48
Manana ny fanontana boaty ve ianao FSX? Sa Steam? Simivation.com dia manana an'ity maodely ity ary nametraka azy tao aho FSX Tsy misy olana, Ity no iray amin'ireo simia amin'ny flyaway
https://flyawaysimulation.com/downloads ... tus-pc-12/
Indraindray ireny rindranasa ireny dia manampy ampirimina fanampiny izay hitarika ny FSX Fampirimana fiaramanidina tsy hamaky tsara ny fisie. Mba hialana amin'ity fanamarinana ity dia iray ihany ny fampirimana misy ny anaran'ny fiaramanidina. Raha vantany vao manokatra ny fampirimana ianao dia tokony haseho mivantana, ny maodely, ny tontonana, ny CFG sns .... Raha mila manokatra lahatahiry roa ianao hahazoana ity fampahalalana ity, FSX tsy hamaky ilay rakitra. Manantenà izany manazava izany ho anao.
Raha vao maka ilay rakitra ianao, fa tsy mametraka izany ao amin'ny FSX Fampirimana fiaramanidina .. Esory amin'ny biraonao. Hiseho ny lahatahiry telo:
flyawaysim ... fisie doc
Mandehana mankany amin'ny rakitra rohy Fly.
Esory daholo ny ordinatera PC-12X
Sokafy ny solosaina PC-12X ary misy solonanarana hafa: AFGPC12X. Ity ny ordinatera izay tianao hapetraka ao amin'ny anao FSX / simobjects / Ordinatera fiaramanidina. Tsindrio mahitsy amin'ny lahatahiry AFGPC12X ary mifidy kopia, ary apetaho ao amin'ny ordinatera ny ordinatera FSX... tokony hiasa tsara!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by sruble » 04 Apr 2018, 15:06
Misaotra fa manana Steam Edition aho. Samy nanandrana ny sidina manidina aho, ary ny fanitsiana. tsy afaka mahazo miasa ny iray. Hiezaka ny torohevitrao aho. mirary soa aho.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by sruble » 04 Apr 2018, 23:50
Misaotra anao . Izany ilay Magic Bullet izay notadiaviko ..... I worked great.Thank you :)
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 05 Apr 2018, 00:47
Tsy misy fisaorana!
Lahatsoratra 5 • Pejy 1 of 1